FAMPIDIRANA HO MPIASAM-PANJAKANA : Vola mitentina 129 tapitrisa Ariary lasan’ireo mpisoloky
Lehilahy iray 34 taona sy ramatoa iray 50 taona no vaosambotry ny Polisy ao amin’ny BC 05 noho ny resaka fisolokiana. 15 septembre 2021
Ity lehilahy ity dia efa mpamerin-keloka ary efa nigadra enim-bolana teny Antanimora tamin’ny taona 2018 noho ny resaka fisolokiana ihany. Ny sabotsy 04 septambra lasa teo izy no voasambotra teny Sabotsy Namehana taorian’ny fikarohana nataon’ny Polisy.
Ny 31 aogositra lasa teo dia tonga nametraka fitoriana tao amin’ny BC Anosy ity ramatoa ity, nilaza fa voasolokin’ity lehilahy ity. Araka ny fitarainana nataony dia milaza fa mahatafiditra mpiasa ao amin’ny Foibem-pitondran’ny hetra na DGI ity lehilahy ity kanefa tsy nisy akory izany. Tamin’ny volana mey lasa teo no nifankafantra ireto olona roa ireto ka tamin’izany no nilazan’ilay lehilahy tamin’ity ramatoa ity fa afaka mampiditra olona hiasa ao amin’ny DGI izy ka raha mahita olona vonona hiditra ao dia hifampizarana ny vola azo. Roboka ity ramatoa ka noresahiny daholo ny fianakaviana rehetra sy ireo olona nifanerasera taminy. Dimy tapitrisa Ariary ny mampiditra ho “Agent des impôts”, folo tapitrisa Ariary ny “contrôleur” ary efatra ambin’ny folo tapitrisa Ariary kosa raha “inspecteur des impôts”. Io ny vola takin’izy ireo amin’ireo olona resy lahatra.
Nandeha anefa ny fotoana dia mbola tsy nahazo valin-teny tamin’ilay rangahy ihany izy ka tonga nanatona ny biraon’ny DGI nanao fanadihadiana ka teo vao fantatra fa tsy misy fampidirana mpiasa izany ao. Nanomboka teo dia tsy tratra antso intsony ity lehilahy ity ary tsy hita izay nisy azy. Vola efa mitentina 129 tapitrisa Ariary anefa no efa lasan’izy ireo tamin’ireo olona resy lahatra tamin’izany. Tsy nanaiky anefa ireo olona nangalan’ity ramatoa ity vola ka tonga nitory azy tao amin’ny BC Anosy ihany ny alatsinainy 06 septambra lasa teo ka tsy maintsy nanokafan’ny Polisy fanadihadiana izy.
Tamin’ny fakana am-bavany nataon’ny Polisy ireo mpitory dia fantatra fa ity ramatoa ity dia nilaza tamin’izy ireo fa efa misy zanany efa nampidiriny tao ary efa miasa izy amin’izao. Ilay rangahy kosa no entiny manaporofo fa tena misy ilay asa ka mitonona ho « contrôleur général des impôts » izy ka izay no nahasarika ireo olona hanao izany. Atolotra ny Fitsarana anio ny raharaha.